Wakaaladda socdaalka oo dib u eegi doonta kiisaskii Putilov - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Summada wakaaladda socdaalka. sawir: Sawirle: Ludvig Thunman/TT
Hayado kale oo xasaasi ah ayuu shaqo ka raadsaday
La cusbooneeyay fredag 23 september 2016 kl 14.54
La daabacay fredag 23 september 2016 kl 14.55
Wakaaladda socdaalka ayaa dib u eegis ku sameeyn doonta dhammaan kiisaskii uu gacanta ku lahaa ninka isku magacaabay Putilov.
Maantadan ayuu ninkaasi ka howl-galaa xog-haynta baarlamanka ee xisbiga Sverigedemokraterna. Halka ay laanta wararka idaacadda ee Ekot, wareeysio ay la yeelatay khubaro ku caddaatay inuu halis ku yahay ammaanka.
Wakaaladda socdaalka ayaa horay u biloowday xilligii kuleeylaha inay dib u eegis ku sameeyso kiisaskii uu ninkaasi gacanta ku lahaa, sida uu sheegay madaxa laanta saxaafadda ee Fredrik Bengtsson.
– Waa dhacdo dabiici ah kolka laga eego hadal-heyayntii ballaarnayd ee ninkaasi iyadoona uu dabadeed madaxa laanta ammaanka ee wakaaladdu go’aamiyay in faylkiisii dib loogu noqdo.
Bishii juun ee sannadkan ayay laanta wararka ee idaacadda Ekot ay wareeysi la yeelatay ninkan isku magacaabay Putilov oo la xiriira wakaaladda socdaalka oo uu uga howl-geli jiray gacan-yare.
Hase yeeshee aannu jirin magaca Egor Putilov uuna yahay magac la sameeystay.
Isla magacaa ayaa sidoo kale lagu qoray qoraallo la xiriira soo-galootiga ee laga sii daayey saxaafado kala duwan ee dalkan laga soo saaro.
Wakaaladda socdaalka oo baaris ku sameeysay sidii wax looga ogaan lahaa cidda uu ninkani yahay, iyadoona ay wakaaladdu markiiba heshay cidda dhabta ah ee uu yahay. Iyo inuu wakaaladda ka howl-geli jiray.
Hase yeeshee aanay wakaaladdu baaritaankeedii uga soo bixin arrimmo lala yaabo. Iminkana ay wakaaladdu go’aansatay in dhammaan dib loogu noqdo kiisaskii uu gacanta ku lahaa.
– Xaqiiqdii, waxaan si hoose u eegi doonnaa go’aammadii uu gaaray, sida uu sheegay Fredrik Bengtsson, madaxa laanta saxaafadda ee wakaaladda socdaalka.
Kiisas uu ninkani gacanta ku lahaa ayay sida u caddaatay baaris ay ku sameeysay laanta wararka idaacadda ee Ekot gaarsiisan yihiin 15 kiis oo quseeya dadyoow ka soo jeeda waddammo ey ka mid yihiin Suuriya, Joorjiya, Mangooliya iyo Ciraaq.
Wakaaladda socdaalka ayaan ahayn oo keliya hayadaha uu jeclaan lahaa inuu ka howl-galo ninka isku magacaaba Egor Putilov.
Johan Wiktorin, oo ku howl-gala saadaalinta adduunka iyo cilmi-baarista ayaa baaris ku sameeyay ninkan.
Iyadoona ay u soo baxeen inuu Putilov xiriir la sameeyay hayadda ka how-tagga iyo badbaadinta bulshada oo magaceeda loo soo gaabiyo MSB. Tallaabadaasina oo uu la yaabay.
– Kolka laga hadlayo hayadda MSB wuxuu isku dayay siduu xiriir ula yeelan lahaa, bishii oktoobar ee sannadkii 2015, sida uu sheegay. Xiriirkaasina oo kula sameeyay isaga oo wata magaca been abuurka ee Putilov.
Mikael Tofvesson wuxuu madax waaxeed ka yahay hayadda MSB.
– Wuxuu war-geeyska Dagens Nyheter ka akhriyay in aannu bilaabi lahayn koox ka shaqeeyn lahayd saameeynta dacaayadda ee saxaafadda Ruushku isagoona sheegay inuu khabiir ku yahay, sidaa daraadeedna u jeclaan lahaa inuu gacan ka siiyo.
War-geeyska Aftonbladet ayaa sidoo kale horay isugu xiray magaca Egor Putilov iyo magaca dhabta ah ee ninkaas.
Ninkan isku magacaaba Egor Putilov ayaa ka gaabsaday inuu wareeysi bixiyo. Isagoona sheegay inay lagama maarmaan ay tahay inuu magacyo kale isticmaalo kolka uu hayadaha la xiriirayo, maadaama uu magaciisa qarsoodi yahay handadaado soo gaaray aawadood.
Putilov ayaa sidoo kale magac iyo lambarro khaldan bixiyay qaboobihii ina dhaafay oo uu muddo toddobaad ah tabar howleed u joogay laanta luuqadda ruushka ee idaacadda Raadiyaha Sweden.
Halka dacwad ay idaacaddu ka gudbisay ka taalo la xiriirta arrimmo ey ka mid yihiin in aannu dib idaacadda ugu soo celin warqaddii aqoonsiga ee idaacadda, hase yeeshee uu sheegay inuu lumiyay.
Egor Putilov ayaa iminka ka howl-gala xoghaynta baarlamanka ee xisbiga Sverigedemokraterna, uuna si xor leh ugu mushaaxi karo dhismaha baarlamanka.
Halka laanta wararka ee idaacadda Sweden Ekot ay saaka daboolka ka qaaday inuu ninkani ka macaashay lacag 6 malyan oo koron gaareeysa guri uu ka iibsaday ganacsade ruush ah ee lagu xukumay xarig, kadib kolkii lagu qabtay muqaadaraad.
Tomas Djurling, oo muddo 17 sannadood ah ka howl-galayay waaxda signaalada ee ciidanka difaaca howlaheeduna ka mid yihiin khatarta hayadaha la isku dayo in loo geeysto ay uga muuqato sawir walaac ah.
– Waa goobo uu saameeyn ballaaran ku yeelan karo. Hayado aad ugu dhega nugul khatarta.
Moderaterna oo Jimmie Åkesson ka dalbatay wax ka qabad